20 ICandelo leNgcaciso leNgcaciso yeNCAA IIgama lamagama
Inqaku elinomxholo othi "iCandelo lama-20 elimangalisayo ngamagama eqela" ngokukhawuleza liya kuhlaselwa ngabafundi ababuza indlela yokusebenzisa isikolo kuloluhlu oludumile. Emva koko, idumela lekholeji lingaveliswa okanye litshabalaliswe yizinga lezizwe ezifana nale. Injongo yayikukudala inkqubo enobulungisa, echanekileyo, enobuchule, kunye nenkqubo yokuhlola. Uhlalutyo lwaqala ngokujonga yonke iCandelo Iikholeji kunye neeyunivesithi kunye nokufunda amazinga abo okugcina, ukufumana iziqu, ukukhetha, kunye noxanduva lwemali. Lao manani ayemnandi, kwaye mhlawumbi ayeluncedo kwinto ethile. Kodwa alukho uluhlu.
Inkqubo yokukhetha yabe isuqukela ekukhetheni izikolo kuba umbhali kunye nomculi bacinga ukuba amagama abo eqela ayimangalisa. Injongo? Qha.
Kaloku ukuba unelisekile ngokupheleleyo ngokuchaneka kwendlela yethu, kuluhlu oluchazwe ngeelfabhethi. Kufike kumfundi ukuba anqume ukuba yeyiphi amagama ayenzileyo.
IYunivesithi yase-Akron Zips. Udweba nguLaura Reyome
Siqala ngeYunivesithi yase-Akron Zips. Yintoni "i-zip" oyicelayo? Eli gama lingabhekisela kwinto ethile ngokukhawuleza, okanye into ephakanyisiweyo. Ukunyaniseka kunokuthi kube yincinci yezinto zombini, ngokuba i-costume yangaphambili yeYunivesithi yaseAkron mascot yaqala ngo-1954 kwaye yayiqulethe i-paper mâché kangaroo intloko kunye ne-zip-up ifanasi yomnxeba. Ukukhethwa kwekhamaroo kwenza ingqiqo eninzi ngenxa yeekhamera zonke ezihamba e-Eastern Ohio.
Iprofayile yaseYunivesithi yaseAkron
Alabama Crimson Tide. Udweba nguLaura Reyome
Kukho isizathu sokuba i-MIT Beavers iqhagamshelane namaqela abo bezemidlalo kwiInjiniya. Amanye ama-mascot anento encinci kakhulu enxulumene nabo. Noko ke, iYunivesithi yase-Alabama ibonakala ihambelane. Mascot yunivesithi yiBig Al, indlovu. Kodwa ukuba uke wabukela umzuzu webhola lebholaji, uyazi ukuba iqela li-Alabama Crimson Tide, kungekhona i-Elephants Elephants. Eli qela laligama layo ngo-1907 ngexesha lomdlalo olwa no-Auburn odlalwa elwandle.
Ukuba uyazibuza ukuba kutheni iCrimson Tide ifakiwe kuloluhlu, siza kuvumela i-Urban Dictionary ukuthetha nathi: I-Crimson Tide.
I-Arizona State Sun Devils
I-Arizona State Sun Devils. Udweba nguLaura Reyome
Njengamanyunivesithi amaninzi, i-Arizona State ayikwazi ukuba ngubani oye wafika negama layo lezemidlalo. Ubungqina obucacileyo bokuba abantu abaninzi bafuna enkulu kwimbali. Yintoni eyaziwa kukuba ngowama-1946 i-moniker yesikolo ishintshile ngokukhawuleza kwi "Bulldogs" kwi "Dev Devils." Kodwa ngubani owanomdla ngokwenene owenza utshintsho? Yintoni ebalulekileyo kukuba utshintsho lwenziwe. Emva kwayo yonke into, i-bulldog yinkangala ebanzi, isalathisi ngelixa ilanga lidemon li ... u ... ah ... Yintoni eyeyona i-Sun Devil? Mhlawumbi inento yokwenza ngokushisa okumile.
Naluphi na uMoya uDeveli, ungowolu luhlu.
I-Arizona State GPA, SAT kunye ne-ACT
ASU Photo Tour
I-PAC 12 INkomfa
Campbell Ukulwa neekamela
IYunivesithi yaseCampbell Ukulwa namaKamela. Udweba nguLaura Reyome
Ngayo yonke ikamela ehlala eUnited States, kuyamangalisa ukuba iYunivesithi yaseCampbell yikona kuphela isikolo elizweni ukufumana ikamela ekutshintshisweni kweenkqubo zayo zezemidlalo. Amacandelo aMaKamela kunye namaKamela aMa Lady, kwaye i-mascot yiGaylord iCamel. Isikolo siseBuy Creek, eNorth Carolina, indawo ekufuneka ihambe neenkamela zasendle.
Isizathu esicacileyo sokuba kutheni ikamela likhethwa njenge-mascot yesikolo ichazwe ngokucacileyo kwiwebhusayithi yaseYunivesithi yaseCampbell: "kusekho ukungaqiniseki ukuba kutheni kukhethwe i-mascot ekhethekileyo."
Iphrofayili yaseCampbell University
Coastal Carolina Chanticleers. Udweba nguLaura Reyome
Nabani na othathe ikhosi kwiChaucer baya kuqonda ukuba kutheni iCôteal Carolina Chanticleers idinga indawo eluhlu lwamagama eqela elingavamile. I-Chanticleer yindoda e-Nun's Priest's Tale yeChaucer's The Canterbury Tales . Ibali lilandela iindwendwe zeli ntaka njengoko ithathwa, kwaye ekugqibeleni liphuma ngaphandle kwaye liphunyuke, i-fox. Iwebhusayithi yaseNorth Coast yaseCarolina ichaza i-rooster yethu yamaqhawe ngesiNgesi yanamhlanje, kodwa mhlawumbi ukhetha ukufunda inkcazelo kwisiNgesi sasekuqaleni yesiNgesi:
Ngenye indlela ayenayo, edibene ne-aloute
Ngama-stikkes, kunye ne-drye dych,
Kwakuye apho wayeseCok, ephakamisa i-Chauntecleer,
Kwimeko yelizwe lokulila kontanga yakhe.
Ikhefu lakhe laliyi-muer ngaphezu kwe-urie orgon
Ngama-messe-dayes, ukuba kwi-gon gon.
Umgcini we-Wel wayeyinkqonkqoza yakhe,
Kukho i-clokke, okanye i-abbey orlogge.
Ngokwemvelo uyasebenza kwi-ascencioun
I-equynoxial kwi-thilke toun;
Kuba ama-whan degrees amahlanu ayenyuke,
Iqela lakwaThan yena, ukuba i-myghte ishintshiwe.
Ubumbano bakhe bubude ngaphezu kwe-fyn coral,
Yaye i-batailled, njengoko yayiyi-castel wal.
I-alle yakhe yayingu-blak, kwaye njengokuba i-jeet it shoon,
I-Lyk isure yaya kuhlamba i-legges kunye ne-toon yakhe,
Iingubo zakhe zimhlophe ngaphezu komgubo we-lylye,
Kwaye i-lyk igolide etshiswa yayinguye umbala.
Inqaku kufuneka lenze izizathu ezicacileyo zeNxweme zaseCarolina zokufumana le yenkukhu ngenxa ye-moniker yezemidlalo. Iwebhusayithi yeyunivesithi ichaza ukhetho lweCantecleer, kodwa ngandlela-thile inkcazo ingayigcinanga into yokuba uChaucer's Chanticleer inikwe ingqungquthela ngeentlobo ezininzi zokugculela ulwimi lwe-chivalric. Iinkcukacha ezincinane.
Iphrofayli yaseCoastal Carolina University
ENingizimu Carolina iikholeji
Cornell Big Red. Udweba nguLaura Reyome
Njengelungu le-Ivy League ephakamileyo, iYunivesithi yaseConell kufuneka ibe negunya elininzi lokwenza ubuchopho ukususela ekufuneka lifike ngegama leqela kunye ne-mascot. Enye inokwenzeka kukuba abantu abakwi-Ivy League abanandaba nento eninzi malunga nezemidlalo. Naliphi na imeko, iYunivesithi yaseConell sele ijikeleze iminyaka engama-150 kwaye ingenayo i-mascot okanye igama leqela.
Ngokungafani neyunivesithi ezininzi, ke, uConell uyazi apho igama elithi "Big Red" livela khona. Ngomnyaka we-1905, umfundi waseConell wayebhala ingoma entsha yebhola. Iqela lalingenalo negama kwaye iifom ebomvu, ngoko ngexesha elikhanyisiweyo wabiza ngokuthi "iqela elikhulu, elibomvu." Ibali elikhuthazayo.
I-BTW, i-mascot engafanelekanga ibhere, kodwa umzekeliso kaLaura ubamba umoya weqela ngokunjalo. Emva koko, kubomvu.
Iprojekthi yaseYunivesithi yaseConell
I-Cornell GPA, i-SAT kunye ne-ACT
I-Tourell Photo Tour yaseYunivesithi
Dartmouth Big Green. Udweba nguLaura Reyome
Amaqela aseConell awathatha igama elithi "Big Red" kuba babemkhulu kwaye bomvu, ngoko kuyacaca ukuba amaqela eDartmouth abizwa ngokuba yi "Big Green" kuba zikhulu kwaye ziluhlaza. Ukucinga okunjalo kuya kuba yinto echanekileyo. I-Dartmouth yayiye "amaNdiya" kwada kwaphakathi kwee-1970 xa ibhodi yeekholeji yekholeji iphetha ukuba uphawu lwamaNdiya lwaluhambelana nemizamo yesikolo yokuqhubela phambili imfundo yaseMerika yaseMelika. Ngelo xesha, i-"Big Green" isiteketiso yaqalisa ukusebenza.
Igama, nangona kunjalo, lingaphezulu kokubhekiselele kumbala wesikolo. Kwintliziyo yase-Dartmouth-epheleleyo yaseNew England ikampu yindawo enkulu eluhlaza kwidolophu (jonga apha ).
I-Cornell, nangona kunjalo, enye iya kuDartmouth ngokuba nebhedi njengemascot. UDartmouth, enye yeekholeji ezindala kwilizwe, akakaze akwazi ukuhlala kwi-mascot kwaye ngenxa yoko akanakho.
Kuyisihlandlo sokulungisa le ntsilelo, kwaye umzekeliso kaLaura ubonisa indlela. Kufuneka uvume ukuba "iDartmouth Broccoli" inomthendeleko omhle kuwo. Kwaye i-broccoli, xa ihamba ngokugqithiseleyo, ichanekile imthunzi elungileyo kwi-Dartmouth. Kubanikazi abacinga ukuba i-mascot ye-broccoli ayinakho ukuvusa ukwesaba kwiqela eliphikisanayo, kufuneka uhambe nakweyiphi na iholide yokudlela kwaye ubukele indlela abazalwana abanokwenkolo abayiphephe ngayo i-broccoli. Ukuba ufuna ukuphakamisa ukwesaba, igama lingatshintshwa kwi-Dartmouth Battling Broccoli, i-Fighting Florets, okanye, yinto eyoyikisayo yikho konke, i-Broccoli ephuhlileyo.
Iprofayili yaseDartmouth College
I-Dartmouth GPA, iSAT kunye ne-ACT grafu
Dartmouth Ikholeji yefoto
Iikholeji zaseNew England eziphezulu
Aces Purple Aces
Aces Purple Aces. Udweba nguLaura Reyome
Xa imibala yakho yesikolo ibomvu kwaye imhlophe, kwaye unquma ukuba igama lakho leqela elithi "abaPhayona" alinakwanela, unokuphela nje ngegama lesiteketiso, "Aces Purces." Yaye ukuba ufuna i-mascot, kuthekani malunga ne "Ace Purple," umkhombe wokungcakaza umjela ukusuka ekupheleni kwekhulu lama-20? Ingakumbi, iYunivesithi yaseVevansville, ngokungafani nezikolo ezininzi kuleluhlu, ngokwenene uyayazi imbali echanekileyo ye-nickname kunye ne-mascot.
Igama livela kumdlalo webhoksikidi kwiYunivesithi yaseLouisville phakathi kowe-1920s. Xa uEvansville eyiphumelele umdlalo, umqeqeshi waseLouisville wathi kumdlali wakhe, "Awunayo i-Aces emine ephakanyisiweyo, ube nehlanu!"
Umyalezo apha, ngokuqinisekileyo kukuba ukugembula kunye nokukopela kuyimfuneko ebalulekileyo kwimidlalo yeekholeji.
Iprofayile yaseYunivesithi yaseVevansville
Idaho Vandals. Udweba nguLaura Reyome
Ngelixa unokuba ufanise iqela lezithuthuthu ezibetha amathayi kunye nokutshitshisa iifestile, iYunivesithi yaseIdaho Vandals ifumana igama layo ngokusetyenziswa kwegama elithile. Iqela lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lidlale kakhulu kangangokuthi kuthiwa "lonakalise" abachasene nabo, yaye kungekudala "i-moniker" ishicilelwe.
Igama elithi "ukuhlambuluka" livela kwisiqingatha sekhulu lesihlanu saseMpuma yesiJamani, iVandals, ekuthiwa, kwiimbali zakudala, yayivame ukubonakaliswa njengabanqabileyo abayithatha iRoma. I-Vandals yaseJamani ixhomekeke kwiVendel, iphondo elisempuma yeSweden, kwaye yintoni isizathu sikaLaura weVandal ibonakala njengeViking kwaye kutheni i-mascot, uJoe Vandal, ibonakala ifana neViking.
Nkomfa enkulu yezulu
IYunivesithi yaseMinnesota Golden Gophers
Minnesota Golden Gophers. Udweba nguLaura Reyome
Iyiphi indlela engcono yokwesatshisa abathandanayo bakho kunokuthiwa igama lakho iqela emva kwincinci encinci. Ekuqaleni kwimbali yombuso, abachasayo baseMinnesota "I-Gopher State" bathi i-gopher yayingaphantsi kakhulu, ingabalulekanga kwaye iyonakalisa ukumela urhulumente. Kodwa xa i-cartoon yezopolitiko yanyatheliswa ngo-1857 iwagxotha ezopolitiko zendawo ngokuzimela ngeempawu zegopher, ibinzana linamathela. Kwaye emva kokuba uMninnesota eba nguRhulumente waseGopher, akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba iinqununu zeYunivesithi yaseMinnesota zibe yiGophers.
Kodwa nangona i-rodent engapheliyo ingatshintshwa ibe yinto ekhangayo neengubo ezikhawulezayo zepende zegolide. Kwakukho ngo-1930 ukuba igama elithi "Golden Gopher" lithatha.
Iprofayile yaseYunivesithi yaseMinnesota
I-Minnesota GPA, i-SAT kunye ne-ACT
Ohio State Buckeyes. Udweba nguLaura Reyome
I-University of Ohio State ye-Buckeye moniker iyaziwa ngokubhetele kunezona zininzi kuloluhlu, kodwa oko akuthethi ukuba akuyinto engaqhelekanga.
Iwebhusayithi ye-Ohio State iphendula umbuzo oqhelekileyo, yintoni i-buckeye? Ngamafutshane, yinto yomthi, i-Ohio buckeye. Yingakho i-Ohio State yenza loluhlu lwamagama angamaqela angaqhelekanga. Emva koko, amanye amalungu angama-19 aloluhlu athetha ngamagama abo emva kwezinto ezinokuhamba.
Kunene - i-buckeye yinto. Uziva utyhafile? Kuthiwani xa ubona i-mascot yesikolo, iBrutus Buckeye, intloko yayo, ewe, i-nut ephezulu? Kuyavunywa, i-buckeye ayilona nut nutable, ngoko iilebula ifaneleke ngakumbi kunamanye amathuba afana ne-Ohio State Cashews okanye i-Ohio State Macadamias.
I-Ohio State GPA, SAT kunye ne-ACT
I-Ohio State Photo Tour
Iikholeji ze-Ohio eziphezulu nakwiimyuvesi
I-Presbyterian College yaseBlue Hose
IPresbyterian Blue Hose. Udweba nguLaura Reyome
ULaura wathatha ingcaciso yegama elithi "Blue Hose" kumzobo wakhe. Omnye usenokuba wayebonakalise i-Blue Stockings yekhulu leshumi elinesibhozo neshumi elinesithoba, iqela labasetyhini abanengqondo egama libhekiselele kwiimpahla eziboyiweyo zeebole ezibandakanya izambatho zabo ezingaqhelekanga.
Nangona i-hosiery ibonakala ngathi i-inspiration engafanelekiyo yegama leqela, oko kuvela ukuba le ngcaciso isondele ngakumbi kwinyaniso kuneLaura. Ngokwe-website ye-Presbyterian yeKholeji, isiqhwa seBlue Hose esivela ekuqaleni kwekhulu lama-20 xa umlawuli wezemidlalo wasePresbyterian utshintshe umbala ofanayo wesikolo obomvu, kunye nabadlali bembethe iiferesi ezihlaza kunye nezigcawu eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Uya kufuneka ufunde ngaphezu kwesihloko kwiphepha lePresbyterian ukuze ufunde ukuba "Hose" ibhekiselele kwi-hosiery. Kwiibhokisi ezinesibindi phezulu kwiphepha, ikholeji iyasithi, "U-Blue Hose ungumlwi onobukroti waseScotland. Ukuba uke wambona i-movie Braveheart, ubonile iBlue Hose yangempela." Ikholeji yamukele le mfazwe, kodwa iNgqungquthela yeBlue Stocking ibhalwe ngokuchanekileyo.
Inkcazo yeChrybyterian College
Ukubonakala kwiKholeji yasePresbyterian
Purdue Boilermakers. Udweba nguLaura Reyome
I-website ye-Purdue University yabuza umbuzo kwiingcinga ezininzi: Yintoni iBoermermaker? Ukuba nje ngumntu owenza iibhoyili, ngokuqinisekileyo, ngumfanekiso wesigqeba esingenasimo.
Kanti kunjalo kanye leyitizo. Ukususela ekusekeni ngo-1869, i-yuyunivesithi ifundise abafundi abaneemvelaphi zemisebenzi yamacandelo e-utilitarian, isenzo esi sikolo siyaqhubeka nanamandla amaninzi kubunjineli nakwezinye iinkalo zobugcisa. Xa iikholeji yokuqala yavela njengebhola lebhola ekupheleni kwekhulu leshumi elinesithoba, amaphephandaba kwimimandla eqhubisanayo yachitheka abadlali be-Purdue abadlali ngamagama anjenge "ama-coal heaver" kunye "nabenzi beebhendi."
Imbali yobunjineli kunye nomlando wezolimo uthathwa yi-mascot esemthethweni yaseyunivesithi, i-Special Boilermaker. Ingumfanekiso wecala lonxweme oneminyaka elishumi elinesithoba, kangangokuthi, ngokukhawuleza, kunokukhahlela ngokukhawuleza i-mascots ezininzi zezikolo kuloluhlu.
Saint Louis Billikens. Udweba nguLaura Reyome
Enyanisweni iYunivesithi yaseSt Louis Louis Billikens kwafuneka yenze olu luhlu lwamagama angamaqela angaqhelekanga kunye namascots. I-Billiken, ngokuya kwi-website ye-SLU, yenziwa idume ngo-illustrator uFlorence Pretz kwiminyaka yokuqala yeshumi lama-20. Wabonisa uBilliken njengesidalwa esifutshane, esinobuhlungu, esithwankqisayo eneendlebe ezicacileyo kunye neencinci ezincinci zeentloko eziphezulu kwintloko yakhe. Isidalwa sasifanele sivelise inhlanhla, kwaye yaguqulwa ibe yiintlobo zemihlobiso ye-kitsch-hood, iibhanki zemali, amabhanki ebhanti, iifolokhwe zokugcoba, iintambo eziphambili, i-statuettes kunye nezinye iifowuni ze-ebay.
Indlela iNyuvesi yaseSt. Louis yabandakanyeka ngayo neBilliken ayikho into ecacileyo, kodwa onke amabali abonisa ukufana okubonakalayo phakathi kwesidalwa sikaClothem Pretz nesidalwa sikaCharles Bender, umqeqeshi weqela lebhola le-SLU. Yaye ngelixa i-Billiken fad yayisigxina, igama leBilliken liye laba namaqela ezemidlalo kwi-University of Saint Louis iminyaka engaphezu kwe-100 ngoku.
Iprofayili yaseYunivesithi yeSt
I-SLU GPA, SAT kunye ne-ACT
IiKatolika zaseKatolika eziphezulu
KwiNkomfa ye-Atlantic 10
Stetson Hatters. Udweba nguLaura Reyome
Ukuba unomdla weqiniso, igama le-Stetson University Hatters liza kukwenza ngokukhawuleza ucinge ngo-Lewis Carroll kaMad Hatter kwiAventures Adventures e-Wonderland . Nerdier okwangoku, unokucinga ngeMad Hatter olwa neBatman kwiidiski ze-DC.
Ngokuqinisekileyo ufunda oku kungengenxa yokuba ungumdlali wezemidlalo, kodwa ngenxa yokuba ufuna isifundo sembali, nantsi ihamba apha: abo bazondayo babedala ("bahlanya njengentshaba") ngenxa yokuba iminyaka emininzi edlulileyo i-mercury isetyenziswe ukuveliswa kweehappy, kwaye kuvela ukuba ukuhlaselwa rhoqo kwi-mercury akulungile kubomi bakho. Kungenxa yoko akufanele unamncedi umbane ngaphandle kwehemmometers okanye wakha indlu yakho phezulu kwesitshixo sombane welahle.
Ukuphazamiseka, akukho i-mercury okanye ubudenge obandakanyekayo kwiStetson. I-hat yaseStetson yase-cowboy yenziwe okokuqala nguJohn B. Stetson, owokuqala ukuzuza kwiYunivesithi yaseStetson. Kungekudala, iyunivesithi yavula i-mascot yayo entsha, uJohn B.
Iprofayile yaseYunivesithi yeStetson
I-stetson yaseYunivesithi yokutyelela isithombe
I-Stetson GPA, i-SAT kunye ne-ACT
Stony Brook Seawolves. Udweba nguLaura Reyome
Akucaci ukuba iStony Brook ifanelekile ukufakwa kuloluhlu kuba i-Seawolf ayiyiyo imascot ekhethekileyo. Erie, ePennsylvania, ineqela elincinci leqela le-baseball elibizwa ngokuba yi-Seawolves, kwaye kwinqanaba leCandelo II, iYunivesithi yaseAlaska kwiiklasi ze- Anchorage nazo zii-Seawolves (i-UAA's gymnastics kunye neHockey yiCandelo I). Sekunjalo, uya kufumana ukuba iprojekti yakho yegama ibeka ama-squiggles abomvu ngaphantsi kwegama lesiqulatho se-seawolf, kwaye nawa maqela anama-mascot awavumelani noko. Erie, mascot C. I-Wolf iyimpungulu egugu igqoke njengepirate. I-Alaska's Seawolf, ngakolunye uhlangothi, isekelwe kwimbali yaseTlingit yaseNdiya yendalo yolwandle. Kungakhathaliseki ukuba yintoni, mhlawumbi uyavuma ukuba i-Seawolf ngokuqinisekileyo ilungele ngakumbi kunegama laseAlaska langaphambili leSourdoughs.
Unokucinga ukuba xa kuziwa kwiStony Brook kunye neendawo zayo kufuphi ne-Long Island Sound ebizwa ngokuba yi-Seawolf yayiza kusekelwe kule ntlanzi ekhohlakeleyo, i-Atlantic Wolffish, leyo, ngokwemiqathango ethembekileyo (um, i-Wikipedia), yaziwa nangokuthi Seawolf.
Le ngcamango yayiyi phoso. I-Stony Brook, njenge-Alaska, ichaza isiqwenga samanzi njengesidalwa saselwandle. Ngoko kuyacaca ukuba iStony Brook mascot Wolfie ayikho enye ingcuka, imfuyo engekho yintsomi okanye ayixhomekeke elwandle nangayiphi na indlela.
Iprofayili yeSUNY Stony Brook
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT graph yeStony Brook
KangamaMKC Kangaroos. Udweba nguLaura Reyome
Ukuba ucinga ukuba i-kangaroo yenza i-mascot enokuqhwala, kusobala ukuba awuzange ukhankanywe enye. Bakhawuleza, banemilenze eqinile, kwaye banxiba izicathulo ezili-18 njengeenkwenkwezi zebhola zebholabhu. Konke oku kuchanekileyo isizathu sokuba ngo-1936 i-Kansas City University (igama langaphambili le-UMKC) likhethe i-kangaroo njenge-mascot yeqela layo lempikiswano. Ewe, ingxoxo. Ayikho iCandelo elidibeneyo. Kulungile, imbali ayinakudla ngokukhawuleza, kodwa "i-kangaroo" ivakalisa "KCU," kwaye loo nyaka wembali xa iyunivesiti yakhetha i-mascot yayo, i-Kansas City Zoo yayisithengele iikhamera ezincinane ezimbini.
Ngoku unokuzibuza ukuba kutheni iinqununu kwii-mascots eziqhelekanga kunye namagama ekomiti anezikolo ezibini ezinamaKhanaroti (khumbula i-Akron Zips?). Ewe, ukuba izikolo ezingama-20 zinama-kangaroo njengama-mascots, zonke ziza kubonakala apha. Yiya eRoos!
Virginia Tech Hokies. Udweba nguLaura Reyome
Ngoko ngo-1896, iCorporated Agricultural and Mechanical College yayitshintshe igama layo ngokugqithisileyo kunye neengqungquthela zezilwanyana zaseVirginia zezoLimo kunye ne-Mechanical College kunye ne-Polytechnic Institute. Ngesizathu esithile abantu babefuna ukunciphisa igama le-syllable ye-23 kwi-VPI Ngegama elitsha, isikolo sasidinga i-cheer entsha. Umntu ophezulu, onokuthi okanye engazange ahlaziye ngelo xesha, waphumelela kumncintiswano ngalokhu:
Techs, Techs, VPI
Ubuhle balobu bungqina buqinisekisa ukungafi. Nangona igama elithi "Hoki" lingenanto lithetha, isikolo asizange sichithwe. Ekuqaleni kwekhulu lama-20, uVirginia Tech wabiza amaqela ayo okulwa namaGobblers, kwaye ngasekupheleni kwekhulu lama-20 iHokie kunye neGobbler zadibaniswa ukudala iHokieBird, into efana ne-turkey -Laura ibonisa ngaphezulu.
Iprojekthi yaseVirginia Tech
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo waseVirginia Tech
Wichita State Shockers. Udweba nguLaura Reyome
ULaura uthathe inkululeko enkulu yokudala kunye nomdwebo wakhe weWitita State Shockers. Igama liyabonakala libonisa ukuba i-electrocution kunye nekhono elinoyikisayo lokubetha abachasene nombhobho wombane.
Intsingiselo yangempela yegama ayiloyiko elimangalisayo: umntu ovuna ingqolowa. I-Purportedly, igama libuyela kwi-poster ka-1904 kumdlalo webhola. Iqela lafumana "i-moniker" yabagxeki kuba abaninzi babadlali bokuqala bavuna ingqolowa ukuze bafumane imali. Ukutshatyalaliswa kwintsimi yeenkozo ebanjwe kwintsimi yokumisa. Umseshi ngumntu ovunayo kunye nokuqokelela ingqolowa. Nangona umbane wombane ungabonakalisa ukwanda, unokufuna ukubeka imali yakho kumadoda ngaphandle apho ukhulula amawaka ehektare.
Iprofayili yaseWitita State University
IiPenguins zase-Youngstown State
IiPenguins zase-Youngstown State. Udweba nguLaura Reyome
Awunxulumani ne-Ohio kunye nama-penguins, kodwa mhlawumbi emva koko xa iYunivesithi yase-Youngstown State yasungulwa ngo-1908, iOhio yayinamaqabunga. Emva koko, ukufudumala kwehlabathi kwakungazange kube nefuthe okwamanje. Inyaniso yokuba ama-penguins ahlala kuphela kumazantsi ase-hemisphere akufanele adikibala le ngqungquthela.
I-Youngstown State inomdla wokuba yedwa iCandelo eliQelayo ukuba ndibe ne-Penguins moniker. Imvelaphi yegama, njengamaqela amaninzi eqela kuloluhlu, ayiqinisekanga. Yintoni eyaziwayo kukuba iqela lebhola lebhola le-Youngstown laseWest Virginia ludlala umdlalo ngosuku olubandayo kunye nekhephu ngoJanuwari ka-1933. Ekupheleni kwamava, iqela lalingamkela igama elithi "Penguin".
Iimviwo zeYunivesithi yaseEmory